Manchester City oo guul muhiim ah ka soo gaartay kooxda Burnley oo ay booqatay…+SAWIRRO – Gool FM
(England) 04 Dis 2019.Manchester City ayaa guul muhiim ah ka soo gaartay kooxda Burnley oo ay ku booqatay garoonka Turf Moor, kaddib markii ay kaga adkaatay 1-4, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 15-aad ee horyaalka Premier League dalka England.
Daqiiqadii 24-aad kooxda Manchester City ayaa hogaanka u qabatay dheesha waxaana 0-1 ka dhigay Gabriel Jesus, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis David Silva.
Qeybta labaad marka ay dib ugu soo laabteen labada kooxood gudaha garoonka, waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u fiican, waxayna sameeyeen fursado badan oo halis ah isla markaana goolal loo filan karay.
Daqiiqadii 50-aad markale Gabriel Jesus ayaa gool u dhaliyay kooxdiisa Manchester City, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 0-2, iyadoo uu goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Bernardo Silva.
Manchester City ayaa hogaanka ciyaarta sii dheereysatay daqiiqadii 68-aad ee ciyaarta waxaana 0-3 ciyaaryahankooda Rodri.
Daqiiqadii 87-aad Riyad Mahrez ayaa wuxuu dheesha ka dhigay 0-4 ay ku hogaamineysay kooxda Manchester City.
Laakiin daqiiqadii 89-aad kooxda Burnley ayaa heshay goolka calanka waxaana dheesha 1-4 ka dhigay Robbie Brady.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 1-4 ay ku adkaatay Manchester City oo marti ugu ahedy kooxda Burnley garoonka Turf Moor.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Burnley Iyo Manchester City ee horyaalka Premier League oo la shaaciyey